China Silicone Coins Purse & Silicone bag factory sy mpanamboatra | SJJ
Ny vola sy ny kojakoja hafa dia zava-dehibe fa tsy mora ny mahita azy ireo, ary tsy madio raha apetraka mivantana ao anaty kitaponao, misy ny maratra na voarangotra hampifangaro azy ireo.
Ny vola sy ny kojakoja hafa dia zava-dehibe fa tsy mora ny mahita azy ireo, ary tsy madio raha apetraka mivantana ao anaty kitaponao, misy ny maratra na voarangotra hampifangaro azy ireo. nytrangam-bary silikolaamin'ny habe kely sy endrika mahafatifaty isan-karazany no tena hamahana ireo olana. Izy ireo dia vita amin'ny fitaovana silicone avo lenta ary ny fikatona zipper na fanidiana vy, dia afaka mitazona ny vola madinika sy ny kojakoja misaraka. Mba hahatonga ny tranga amin'ny habe lehibe toy ny kitapo tànana, ireo no kitapo silikôlôma izay ampiasaina amin'ny fomba mety amin'ny fiainanao isan'andro. Ny loko afara sy ny loko logo mahafinaritra dia afaka mifanandrify amin'ny loko PMS arakaraka ny takian'ny mpanjifa, ary manao dokambarotra ny hevitra sy ny hevitr'ireo mpanangona vola. Ny trangam-bary sy ny kitapo silikôla dia mahery, mateza ary maharitra ampiasaina. Izy ireo dia mahatohitra rano ka azo ampiasaina amin'ny toetr'andro orana, mba hialana amin'ny fiara, ny tranonao ary ny toerana hafa ho lena. Ny kitapo silikôla dia Eco-friendly sy tontolo iainana handalovana fenitra fitsapana avy any Etazonia na Eoropeana, ka azo ampiasaina amin'ny fitondrana sakafo sy ny fofona.
Fitaovana: silônaly avo lenta, malefaka, sariaka tontolo iainana ary tsy misy poizina
Volavola: logo 2D, 3D any ivelany, ny endrika dia azo alamina
Size: Latsaky ny 100 mm, na namboarina
Loko: afaka mifanitsy amin'ny loko PMS, na manaraka ny takinao.
Logos: Ny logo dia azo atao pirinty, apetaka, alefa, feno loko ary hafa
Fametahana: fanidiana vy, peratra hitsambikina, fanalahidy, rojo vy, farango na fanarahana
Teo aloha: Fehin-kibo Silicone
Manaraka: Saron'ny rakotra satroka silika
Kitapom-bola Silika Sariitatra Silika
Kitapo vola silika
Kitapom-bolan'ny Silika mahafatifaty